गरिबको संख्या बढाउँदै घरभाडा, यस्तो छ अष्ट्रेलियाको गरिबी कथा... | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
सिड्नी । सिड्नी म्यारिकभिलकी एन्जिला( नाम परिवर्तन) लाई कपडा परिवर्तन गर्नुपर्यो भने अनलाइनमा अरु कसैले प्रयोग गरिसकेको कपडा खोज्छिन् ।
घरमा केही फर्निचर आवश्यक पर्यो भने पहिले बाटेमा कसैले फालेको छ कि भनेर खोज्छिन् र नभेटेको अवस्थामा सेकेण्ड ह्याण्ड सामान किन्नका लागि अनलाईन साइटहरुतर्फ औंला दौडाउँछिन् ।
तर पनि उनलाई दैनिक जीवनका आवश्यक्ता पुरा गर्न निकै कष्ट छ । आम्दानीको करिब आधा रकम कोठाभाडा तिर्दै ठिक्क हुने भएपछि उनलाई अन्य घरायसी खर्चका लागि रकम अपुग हुनेगरेको हो ।
वार्षिक पचास हजार डलर कमाउने उनी हप्ताको ४ सय ८० डलर रकम कोठाभाडावापत तिर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘म्यारिकभिल वरपर राम्रो कोठा भाडामा लिने हो भने हप्ताको ६ सय तिर्नुपर्ने हुन्छ । मेरो त तुलनात्मक रुपमा सस्तो छ । तरपनि दैनिकी धान्न निकै समस्या भइरहेको छ’, अष्ट्रेलियाको पत्रिका सिड्नी मर्निङ हेराल्डसँगको कुराकानीका क्रममा उनले भनेकी छिन् ।
एक सन्तानकी एकल आमा रहेकी एन्जिला मात्र होइन सिड्नीमा घरजग्गाको मुल्य चुलिएसँगै यस्ता धेरै परिवारलाई आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा कोठाभाडावापत तिर्नुपरेको छ ।
कोठाभाडावापत हालै सार्वजनिक एक तथ्यांकका अनुसार सिड्नी सबैभन्दा कम किफायती शहरमा पर्छ । यहाँ औसतमा सर्वसाधारणले आफ्नो कुल आम्दानीको २९ प्रतिशत रकम घरभाडावापत खर्चने गरेका छन् ।
सिड्नीको व्यापारीक क्षेत्र, डार्लिङ पोइन्ट, एजक्लिफ क्षेत्रका वासिन्दाले त झन् आफ्नो आम्दानीको ८७ प्रतिशत रकम घरभाडा वापत खर्चनुपर्ने अवस्था रहेको तथ्यांक छ । त्यस्तै ३० प्रतिशत जनता खाद्यान्न, यातायात, औषधी लगायतका आधारभुत आवश्यक्ताबाट पनि वञ्चित छन् ।
सिड्नीको व्यापारिक क्षेत्रबाट १० किलोमिटर वरपरको क्षेत्रमा सर्वसाधारणले आफ्नो आम्दानीको कुल ६० प्रतिशतसम्म खर्च कोठाभाडावापत बुझाउनुपरेको छ भने उक्त खर्च बेहोर्न नसक्नेहरु लिभरपुल, ब्लयाकटाउन जस्ता क्षेत्रतर्फ धकेलिरहेका छन् जहाँ यातायात, शिक्षा लगायतका आधारभुत आवश्यक्ताका पूर्वाधारहरु पर्याप्त छैनन् ।
एनएसडब्लयु आवास कार्यकारी प्रमुख करेन वाल्सलाई उद्घृत गर्दै हेराल्डले यो अवस्थालाई चिन्ताजनक भनेको छ । उनले भनेका छन्, ‘यो अवस्था साँच्चै चिन्ताजनक छ । यदि सिड्नी क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरु सरकारी पेन्सन या भत्तामा बाँच्नुपर्ने अवस्था छ भने उनीहरुले त कोठा भाडामा लिनै सक्दैनन् ।’
नेपालीहरुको अवस्था पनि उस्तै
सिड्नीमा नेपाली समुदायको संख्या करिब ८० हजार छ । उनीहरु विभिन्न प्रयोजनका लागि अष्ट्रेलिया आइपुगेका हुन् । उनीहरु पनि भाडाबाट पीडित नै छन् ।
करिब १० वर्ष पहिले अष्ट्रेलिया आइपुगेका स्याङ्जाका अर्जुन पाण्डे ( नाम नखुलाउन आग्रह गरेकाले परिवर्तन) पनि पछिल्लो ५ वर्षमा सिड्नीको कोठाभाडा निकै बढेको अनुभव छ ।
उनी सम्झन्छन्, हामी पहिले बस्दा ३ सयदेखी ४ सयसम्म राम्रै युनिट तथा घरहरु भाडामा पाइन्थ्यो । तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । तीनै युनिट र फ्ल्याटहरु अहिले ५ सयदेखी ७ सयसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक बत्ति, इन्टरनेट लगायतका बिलको खर्च त छुट्टै छ ।’
नेपालीहरु प्रया यहाँ विद्यार्थीका रुपमा आएका हुन्छन् । कतिपयले भने पिआर या यहाँको नागरिकता लिएपछि पैसा जम्मा गरेर घर किन्ने गरेका छन् । अर्जुन भन्छन्, ‘नेपालीहरु सेयरिङमा बस्छौं र मात्रै सहज छ । होइन भने एक्लैले पूरा भाडा तिर्नपरेको अवस्थामा त सम्भव नै हुँदैन । हामीलाई यहाँको खर्च धानेर मात्रै पुग्दैन । नेपाल पनि पैसा पठाउनुपर्ने हुनाले साथीभाईसँग मिलेर युनिट (फ्ल्याट) लिन्छौं र भाडा तिर्न सहज भएको छ ।’
किन महँगियो घरजग्गा ?
सिड्नीमा घरजग्गा महँगिनुका भित्र थुप्रै कारण छन् । ती मध्येको प्रमुख कारण भनेको माग र आपूर्तीबीचको असन्तुलन नै हो । केही वर्ष अघिसम्म घर भाडामा पाउन निकै मुस्किल थियो सिड्नीमा । बढ्दो जनसंख्या र सिमित घर तथा अपार्टमेण्टका कारण घरजग्गाको मुल्य आकासियो । सिड्नीमा घर बनाउन सहज भएपनि स्वीकृतिको प्रकृया निकै झण्झटिलो छ । घर बनाउनु पहिले लगानीकर्ताले करिब ६ महिना काउन्सिल(नगर परिषद्) को स्वीकृति पर्खनुपर्छ । सोही कारण घर निर्माणको प्रक्र्रिया सुस्त भएपछि बढ्दो जनसंख्यासँगै घर तथा अपार्टमेण्टहरुको माग र मुल्य बढ्यो । लगानीकर्ताले लगानी अनुसारको प्रतिफल पाउन घरको भाडा बढाए । माग बमोजिम आपूर्ती नहुँदा सर्वसाधारण भनेजति भाडा तिरेर बस्न वाध्य भए र सोही क्रम बढेर घरभाडाको मुल्य आकासियो ।
त्यसो त कतिपयले घरजग्गा कारोवारमा वैदेशिक (विशेषत चिनियाँ) लगानीकर्ताहरुले भनेजति पैसा तिरेर घरजग्गाको क्षेत्रमा लगानी बढाएकाले पनि घरजग्गाको मुल्य आकासिएको तर्क गर्छन् ।
सिड्नीमा रहेर घरजग्गा कारोवारमा संलग्न किरण थापा भन्छन्,‘यसको मुख्य कारण भनेको माग अनुसारको आपूर्ती नभएर नै हो । दोस्रो कारण भनेको लगानीकर्ताले महँगोमा घर किनेपछि भाडा पनि सोही अनुसारको चहान्छन् ।’
५–७ वर्ष भाडा नबढ्ने
त्यसो त सिड्नीमा घर जग्गाको मुल्य आकासिएसँगै सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि केही प्रभावकारी कदम चाल्न थालेको छ । सरकारले विदेशी लगानीकर्ताका लागि करको दायरा बढाएको छ ।
एनएसडब्लयु सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई करको दायरा बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याएको छ । यतिमात्र होइन, घर किन्न चहानेलाई बैंक ऋणमा सहजता लगायतका सहुलियत प्रदान गरेर स्थानीयका लागि आवासको पहुँच वृद्धि गर्ने सरकारी योजना छ । यससँगै पर्याप्त संख्यामा निर्मित घर तथा अपार्टमेण्टहरुका कारण पनि अबका केही वर्ष सिड्नीमा घरजग्गाको मुल्य ओरालो लाग्ने देखिएको छ ।
ब्रोकर थापा भन्छन्, ‘घरजग्गाको कारोवारमा अबका केही वर्ष गिरावट आउने तथ्यांकहरुले देखाइसकेका छन् । आगामी तीन वर्षमा तीन प्रतिशतभन्दा बढीको गिरावट आउने तथ्यहरु बाहरिसकेको अवस्था छ । त्यसमाथी अहिले नै घरहरु पर्याप्त हुँदा भाडामा लगाउनै मुस्किल हुनथालिसकेको छ । थापा आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्, ‘कुनै अपार्टमेण्ट या घर खाली भएमा भाडामा लगाउन हप्तौं लाग्न थालिसकेको छ । सामान्यतया सिड्नीमा घरजग्गा कारोवारको सर्कल १० वर्षको हुन्छ । तर यहाँ विदेशीहरु बढ्ने क्रममा रहेकाले घरको भाडा स्थीर रहने या घट्नपनि सक्ने क्रम अबको पाँच–सात वर्ष रहन्छ भन्ने अनुमान हो ।’
अष्ट्रेलियामा बढ्दो घरजग्गाको मुल्य उकालो लाग्न थालेसँगै धनी र गरिबबीच खाडल बढेको भन्दै सरकारको सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ । – नेपालीपत्रबाट